फेसबुके कार्टुनिष्ट का कुरा
Homepoliticsफेसबुके कार्टुनिष्ट का कुरा
mskhanal 10:48 PM
ब्यङ्ग्य समाजको एउटा अभिन्न पाटो हो। समाजका बिकृती बिरुद्ध आबाज उठाउने मात्र नभइ त्यसको मार्गनिर्देश गर्ने काम ब्यङ्ग्यको हो। त्यसैले ब्यङ्ग्य को आफ्नै महत्व छ। तर ब्यङ्ग्य को आफ्नै मुल्य र मान्यता पनि रहन्छ। ब्यङ्ग्य सस्तो मनोरञ्जन नभइ गहन अर्थ बोक्ने ससक्त हतियार बन्नु पर्छ। ब्यङ्ग्य पढ्ने ब्यक्ती मात्र नभइ ब्यङ्ग्य को निसाना बनेको ब्यक्ती लाइ समेत पाच्य तथा सन्देश ग्रहण योग्य बन्नु पर्छ।
तर हिँजो आज सामाजिक सञ्जाल हरुमा असाध्यै गैरजिम्मेबार तरिकाले कार्टुन बनाउने प्रबृती बढेको छ। फोटोसप जानेकै भरमा जनावरको सरिरमा मन नपरेका नेताको टाउको जोडेर या नेताको आपत्तीजनक तस्बिर बनाएर आफुलाइ असाध्यै महान कार्टुनिष्ट भएको बखान छाँट्नेको संख्या मनग्य रुपमा बढेको छ। यो प्रबृतीको सिकार लगभग सबै नेताहरु बनेका छन।
कार्टुन बनाउँदा या ब्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तीका केहि काम(समाज सँग सम्बन्धीत) को बारेमा र त्यसले समाज मा पार्ने असरको बारेमा र त्यसको बारेमा सम्बन्धित ब्यक्तिले ब्यक्त गरेको धारणा लाइ मजाक को रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सम्बन्धित ब्यक्तिको भनाइ र गराइमा देखिएका फरक बाहेक ब्यक्तिगत सन्दर्भ कार्टुन को बिषय बन्नु जायज हुन सक्दैन। ब्यक्तिगत कुरा मा पनि हचुवाको भरमा कार्टुन बनाउनु गलत कार्य हो। तर हाम्रा फेसबुके कार्टुनिष्ट ले त कार्टुनमै दुइजनाको नाजायज सम्बन्ध भएको सम्म देखाइसके। यो भन्दा तल्लो स्तरको हर्कत के हुन सक्छ?
कतिपय काम यस्ता हुन्छन जसले क्षणिक मनोरञ्जन त दिन्छन तर त्यसको सार पक्ष त्यती मिठो हुँदैन। बाटोमा बसेर केटी जिस्काउँने, आफ्नो गल्तिमा समेत चर्को बोलेर आफु नै सही देखाउने जस्ता कार्य देख्दा उत्कृष्ट देखिए पनि आफु नै त्यसको मारमा परेपछी त्यसको बास्तबिक पिडा थाहा हुन्छ। त्यस्तै ब्यङ्ग्य पनी हचुवाको तालले गर्दा त्यस्तै खालको निम्न स्तरिय बन्छ। कल्पना गर्नोस त तपाइँको टाउको कुकुरको सरिरमा जोडेर प्रकासित गरे के होला? कुरा त्यती हो। तपाइँको कामलाइ मजाक गरेर भन्दा एकछिन उडाए जस्तो मात्र अनुभुती हुने तर कुकुर बनाउँदा पिडा हुने सबैको बानी हो।
फोटोसप चलाउँदैमा कोहि पनि कार्टुनिष्ट हुँदैन। कार्टुनिष्ट बन्न त्यहि प्रकारको क्षमता चाहिन्छ। कतिपय कार्टुनिष्ट का कार्टुन हेरेर कार्टुनिष्ट सँग सम्बन्धित ब्यक्तीले भेटेका कुरा पटक पटक आइरहन्छन। त्यो नै कार्टुनिष्ट को पहिचान हो। र बाँकी फेसबुके कार्टुनिष्ट का कार्टुन क्षणिक हाँसउठ्दा देखिए पनि सारमा पिडादायी नै हुन्छन।
Basanta May 16, 2010 at 3:32 AM
ठिक कुरा गर्नुभयो। अचेल अत्यन्त अभद्र र ब्यक्तिगत आक्षेपमात्रै देखिने कार्टूनहरुको बाढी आएको छ फेसबुकमा।
अलिअलि फोटोशप चलाउन जानेकै भरमा कलाको एउटा सशक्त विधाको हुर्मत लिनेहरुलाई धिक्कार छ!
Unknown May 16, 2010 at 7:05 AM
मलाई पनि असाधै चित्त नबुझेको कुरा थियो यो ।
मलाई लाग्छ व्यंङ्य विधा र त्यसमा पनि कार्टुन चित्र वनाउने कार्य एकदमै सिर्जनात्मक कुरो हो । तर अर्काको फोटो वा अरुले बनाएको चित्रमा भद्दा 'सम्वाद' वा विकृत अवयव थपथाप गरेर यस्तो घटिया मजाक गर्ने प्रवृत्ती भने पक्कै पनि अशोभनिय कुरा हुन ।
एकदमै सहि विषय उठाउनु भयो । मेरो आफ्नो विचारको कुरा गर्ने हो भने, मलाई पटक्कै मन नपर्ने मान्छे वा नेताको यस्तो कार्टुन बनाएको पनि मलाई ठीक लाग्दैन (चित्त बुझ्दैन) ।
मलाई यस्तो भद्दा चित्रमा कसैले 'ट्याग' गर्ने बित्तीकै मैले आफुलाई भने सो 'ट्याग' बाट मुक्त गर्ने गरेको छु । यसलाई हामी सबैले निरुत्साहन गर्नै पर्छ ।
Aakar May 16, 2010 at 8:32 AM
हिजो आज, यस्तो कार्टुन को त बाढि आएकै छ । त्यसमाथि ट्याग गर्नेहरु ले पो दिनु दु:ख दिएकाछन् । अब कसैले ट्याग नगर्ने गरि, आफ्नो सेटिङ मिलाउँ भने पनि कहिलेकाँहि ट्याग गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ, नगर्दा पनि जे पायो त्यही फोटोमा ट्याग गरिदिन्छन् ।
Ashesh May 16, 2010 at 10:23 AM
ekdumai sahi kuro. herda ekchin ramailai lage pani yesta kura haru li nirutsahit garnu nai ramro ho.i agree with your view.
Jotare Dhaiba May 16, 2010 at 4:39 PM
व्यङ्ग्य को आफ्नै महत्व र आफ्नै मूल्य-मान्यता हुन्छ ।
तपाईंको यति कुराले नै धेरै भन्छ । 'फेसबुके' फोकटियाहरूको छुल्याहा कामलाई व्यङ्ग्यको नाम दिनु व्यङ्ग्यकै बदनामी हो जस्तो लाग्छ । तिनले त्यसरी मजाक गर्दा सम्बन्धित पात्र र चरित्रको कति चित्रण होला, गल्ती गर्नेलाई कति हदसम्म तरङ्गित पार्ला आफ्नो ठाउँमा छ । तर ती 'रोगी' चित्रबाट तिनले आफ्नै हैसियत र दयनीयताको परिचय दिइरहे झै लाग्छ मलाई त । राम्रो कुराको उठान गर्नुभयो महेश जी ले ।
कलालाई चिन्ने निकै सीमित दिमाग छ हामीकहाँ ।
Dhruba Panthi May 16, 2010 at 5:49 PM
एकदमै सही विषय उठाउनुभयो। यो विकृति अचाक्ली नै भएको छ अचेल।
Rajan Ghimire May 17, 2010 at 10:06 AM